Fivoriana ankizivavy saina dia mety ho zavatra, indrindra raha tsy manana hevitra ny zavatra ataonao. Raha te-hitsena ny zazavavy ho namana, fling, na fifandraisana matotra, misy ny sasany zavatra izay tokony sy ny tsy tokony atao mba hampitomboana ny vintana ny fanorenana ny fifandraisana aminy. Soa ihany, ny fivoriana tovovavy matetika no be dia be, tsy dia sarotra noho ny olona mihevitra. Raha toa ka mianatra ny fomba hampahafantatra ny tenanao ary avy eo dia mavitrika mametraka ny tenanao ho amin’ny toe-javatra ara-tsosialy, ny fivoriana ny tovovavy dia misy tsio-drivotra. Fivoriana ankizivavy saina dia mety ho zavatra, indrindra raha tsy manana hevitra ny zavatra ataonao. Raha te-hitsena ny zazavavy ho namana, fling, na fifandraisana matotra, misy ny zavatra sasany izay tokony sy ny tsy tokony atao mba hampitomboana ny vintana ny fanorenana ny fifandraisana aminy. Soa ihany, ny fivoriana tovovavy matetika no be dia be, tsy dia sarotra noho ny olona mihevitra. Raha toa ka mianatra ny fomba hampahafantatra ny tenanao ary avy eo dia mavitrika mametraka ny tenanao ho amin’ny toe-javatra ara-tsosialy, ny fivoriana ny tovovavy dia misy tsio-drivotra. Ny fiarahana amin’ny tranonkala an-tserasera matetika manana an-tapitrisany maro mpampiasa vavy izay tokan-tena, ary mitady ny hihaona olona. Misy tranonkala maimaim-poana ny sasany kosa dia mitaky anao mba handoa ny sarany isam-bolana. Hamaritra izay sehatra tianao hampiasaina, ary ny fitsidihana ny fiarahana amin’ny tranonkala mba afaka manokatra kaonty. Ny fiarahana amin’ny fampiharana toy ny Tinder, Kafe, Bagel, sy ny Hinge dia tafiditra amin’ny Facebook sy ny famindrana ny vaovao avy amin’ny haino aman-jery sosialy mombamomba azy mba hanampy amin’ny fananganana ny mombamomba mampiaraka. Afaka maka ireo fampiharana ny finday sy ny hampiasa azy ireo mba mijery ny tovovavy ao amin’ny faritra misy anao izay mitady ny hihaona olona iray. Raha vao mamorona ny mombamomba an-tserasera, ianao dia afaka mameno izany avy ny zavatra ilaina hitsena. Ahitana sary vao haingana ny tenanao sy manampy antsipirihany ao amin’ny mombamomba ny zavatra tadiavinao ao ny ankizivavy. Mamaritra raha toa ianao mitady namana, tsotsotra ny fiarahana, na ny fifandraisana matotra. Manao ny mombamomba ny vazivazy izany fa tena tsy hay hadinoina sy hitandrina ny mombamomba azy toy ny tena araka izay azo atao. Fikarohana ho an’ny tovovavy izay monina manodidina anao, ary tsindrio eo amin’ny mombamomba izay hitanao mahaliana. Foana ny fanokafana line tsotra sy mivantana ary tsy mampiasa angady-up tsipika na iray-tsiny. Fa tsy, ianao dia afaka manomboka miresaka ho azy ireo amin’ny alalan’ny fitadiavana zavatra iombonan’ny roa. Raha toa ka manana sary avy amin’ny Natural Tantara tranom-Bakoka, dia mety nilaza zavatra toy, ‘Hey, izaho Joe. Tiako ny Natural Tantara tranom-Bakoka koa. Rehefa no nalehanareo tany?’ Rehefa mandefa ny hafatra voalohany, ianao te-hitandrina ny resaka mandeha. Angataho ny ankizivavy iray fanontaniana, miezaka hanorina fifandraisana aminy. Hafatra an-tserasera mandra-izy dia mahatsapa ny aina, dia nangataka ny nomeraon-telefaonina. Tsy hoe overtly ara-nofo zavatra na nihady lalina loatra ny fiainany. Hitandrina azy tsy ara-dalàna sy ny mahafinaritra. Tsara ny resaka foto-kevitra ahitana ny mozika, ny sarimihetsika, ny olo-malaza fifosana, ny boky iray vao haingana ianao mamaky teny, na zavatra hafa izay tsy maintsy iraisana. Raha toa ianao mahatsiaro ho toy ny lahatsoratra resaka dia fanakanana tsy mametraha fanontaniana toy ny, ‘Ka fotsiny aho nahita ny sarimihetsika Tusk, ary nitsoka an-tsaiko. Tsy amin’ny fomba tsara. Tsy ho zava-doza sarimihetsika?’ Indray mandeha ianao hanorina tsara ny fifandraisana amin’ny zazavavy, tonga ny fotoana mba manontany izy raha te hihaona amin’ny olona. Hitsena azy tao ambany-adin-tsaina-bahoaka ny fametrahana toy ny fivarotana kafe, brunch, na an-tongotra tao amin’ny zaridainam-panjakana. Miantso ny tovovavy eo amin’ny telefaonina, ary miezaka manokana fotoana mba mihaona amin’ny olona. Ny iray amin’ireo fomba mora indrindra mba hanomezana vaovao ny ankizivavy dia amin’ny alalan’ny mihantona avy amin’ny efa misy ny namana sy ny fanorenana fifandraisana amin’ny namana. Miresaka tovovavy eo amin’ny fampianarana sy ny hanao azy io ho fotoana miezaka ny vondrona miaraka amin’izy ireo ho an’ny mpianatra asa. Raha toa ianao ka avy ao am-pianarana na tsy mandeha any an-tsekoly, sonia ho an’ny iray kilasy ao amin’ny fiarahamonina eo an-toerana foibe ho amin’ny lohahevitra iray izay mahaliana anao. Manomboka amin’ny firesahana momba ny kilasy mirona ny zavatra talohan’ny nifindrany tao manokana kokoa ny resaka. Fivoriana ankizivavy any am-piasana no hanome anareo ny zavatra iombonana mba hiresaka momba ary dia ho kely saina noho ny fampidirana ny tenanao mba ny olon-kafa. Mandeha avy ny fomba miresaka ny ankizivavy any am-piasana izay tianao. Indray mandeha ianao hanorina finamanana, manontany azy ireo raha toa ka te vatany teo ivelan’ny ny asa. Miresaka momba ny asa amin’ny hoe zavatra toy, ‘ho zava-dehibe? Telo roa nifandimby amin’ity herinandro ity. Tsy tianao fa ny fandaharam-potoana dia kely kokoa nikarakara?’ Mangataka azy mba hiarahana amin’ny hoe zavatra toy, ‘Yo, mihevitra aho fa ianao tena ny vatany. Mety te-hanantona ivelan’ny asa indraindray?’ Na dia mety hahazo kokoa ny manokana sy milaza zavatra toy, ‘fa Inona no ataonao amin’ity zoma ity? Te-ho any happy hour amiko?’ Ny fivarotam-boky no toerana lehibe mba hanomezana vaovao ny ankizivavy sy manome anao ny tsara ny lohahevitra ny fitokonana hatramin’ny voalohany ny resaka. Raha mahita zazavavy avy nanamarina ny boky nahafinaritra anao, hampahafantatra ny tenanao sy ny dresaka momba ny boky. Raha toa ianao mahatsiaro ho natahotra ny fisotroana, na fikambanana, hitondra miaraka ny mpivady ny namanao. Miezaka ny hanao masony ankizivavy izay hitanao tao amin’ny bara hidiny sy mandeha ka hampahafantatra ny tenanao ho azy. Na afaka miteny ianao hoe: ‘Ny sneakers dia tena mahafinaritra, dia izy ireo ny vaovao Rivotra Max Groats? Aho dia mieritreritra momba ny fahazoana ny roa tamin’izy ireo ny tenako. Raha toa ianao ka miezaka hampahafantatra ny tenanao ho amin’ny ankizivavy fa tsy fantatrao, ianao dia tsy maintsy manao masony azy voalohany. Jereo ny tari-dalana sy hijery raha toa izy reciprocates ny masony. Raha toa izy tsy eo ny maso sy ny tsiky, fa matetika ny famantarana ara-batana fa te miresaka aminao. Ny teny fampidirana dia tsy maintsy ho tsaratsara, izany fotsiny dia mba hahazoana valiny. Fotsiny ny hoe ‘Salama’ ary lazao azy ny anaranao. Avy eo dia, dia afaka mangataka ny inona ny anarany sy ny manontany azy ny fomba ny andro, dia mandeha. Raha toa ka efa manana fifandraisana izay efa natsangana tamin’ny alalan’ny niady hevitra, ianao dia afaka mandeha ho an’ny rehefa namihina voalohany hitsena azy. Ataovy azo antoka ny mamaky teny ny vatany. Raha hisintona indray na mijery tsy mahazo aina, hanova ny famihinana an-tanany. Hanohy hanao adihevitra miaraka amin’ny tovovavy sy ny manontany ny fanontaniana momba ny tenany. Hisokatra, manaiky, ary ny marina rehefa miresaka momba ny tenanao. Raha ny resaka mivoaka tsara sy mahatsapa voajanahary, dia anontanio azy noho ny fifandraisana vaovao mba afaka miresaka azy taty aoriana. Afaka milaza zavatra toy, ‘Hey, mba aho momba ny hiala eto fa tena tiako ny miresaka aminao. Mihevitra aho fa afaka mahazo ny maro noho izany dia afaka ny vatany amin’ny ho avy?’ Na dia afaka milaza zavatra toy, ‘Izany dia tena tsara fivoriana anareo anio hariva. Aoka ny fifanakalozana isa izany fa afaka mandehandeha tsy ho ela. ‘Raha efa efa mijery ny tovovavy fa toy ny avy lavitra nefa tsy nanana ny tsinay mba handeha hiakatra ho azy sy hampahafantatra ny tenanao, ny asa ihany no manohitra ny tenanao. Ny ela miandry anao, ny kokoa ny toe-draharaha ho hafahafa. Fa tsy noho ny tahotra rehetra ny mety ho vokatra vao hiakatra ho any amin’ny tovovavy sy hampahafantatra ny tenanao. Miankina aminao sy ny tovovavy fa ianao amin’ny. Raha toa ianao mahatsiaro ho toy ny tsy misy dia tena tsara simia, afaka mandeha any amin’ny oroka amin’ny faran’ny ny daty. Raha toa ka manidy ny masony sy ny hetsika akaiky kokoa ianao, dia fantatrao izy dia liana. Raha toa ka manidy ny vatana eny na manosika anao izy, aza miezaka ny hanoroka azy indray. Ny sipa vao haingana dia nivadika ny amiko sy ny vaovao rehetra ny ankizivavy dia manandrana tsy miasa ary tsy afaka ny hahita ny olon-kafa, inona no ataoko? Ny maha-irery sarotra, fa indraindray isika dia mila fotoana ihany mba ahafahantsika manamafy ny tenantsika. Mametraka ny tenanao bebe kokoa ho zavatra tianao toy ny fanatanjahan-tena, ny fanoratana, na ny lalao. Rehefa mihaona ny zazavavy izay tsy tena toy ny, afaka manomboka ny daty azy ireo. Miezaha mba ho maro ny vehivavy namana araka izay azo atao. Afaka miezaka ny hanova ny heviny amin’ny alalan’ny miresaka ny iray-on-iray. Miezaka ny hahazo ny isa an-tariby avy amin’ny namany, ary hazavao ny tenanao amin’ny alalan’ny teny. Milaza fa ianao tsy ilay karazana olona izay mihevitra ny olona rehetra ianao.
Eritrereto ny antony dia mety ho lainga. Mety ho menatra na tsy te-handratra ny olona ny fihetseham-po. Tsy maintsy miandry ela loatra mba handefa lahatsoratra sy hitandrina ny resaka mandeha. Ny alina ianao, hihaona aminy, rehefa any an-trano, azonao atao ny andinin-teny ny zavatra tahaka ny hoe ‘tsy tena nanana ny fotoana tsara.
Aoka isika hanao izay indray tsy ho ela
‘Izany dia miankina amin’ny fomba taloha ianao, ary inona ny toe-javatra ianao. Raha ny ara-dalàna ao ny fanjakana, manomboka hanorina finamanana sy ny mandehandeha miaraka aminy tao anatin’ny toe-javatra ara-tsosialy. Raha toa ka misy simika misy, dia anontanio azy raha izy no te-handeha amin’ny daty ianao. Hojerentsika izay izy no mijery sy manao ny tsara fanehoan-kevitra momba ny vokatra. Ohatra, raha toa ka izy no mijery ny oatmeal afaka milaza hoe: ‘Efa mba nanandrana ny iray amin’ny carissin? Aho tsy mieritreritra aho fa toy izany, fa izany no tena tsara. ‘Izy raha toa sambatra ny miaraka izany, afaka hampahafantatra ny tenanao sy ny hanombohana ny resaka. Tao amin ‘ ny farihy-trano, misy ny vaovao zazavavy izay nifindra tany manerana ny helo. Ahoana no fomba tokony handeha momba ny fihaonana aminy? Btw efa sambo? Miezaka mametraka ny tenanao ho amin’ny toe-javatra izay izy ary avy eo dia hampahafantatra ny tenanao ho azy. Mety ho eo amin’ny rano, ao amin’ny antoko, na ny any ny sasany ara-tsosialy hafa ny toe-draharaha. Raha tanora ianao, izany no tena mety satria izy dia saro-kenatra. Miezaka ny hametraka fanontaniana fotsiny fa tsy hoe ‘hi. ‘Milaza zavatra toy, ‘Hey, ahoana moa no ataonao amin’izao fotoana izao? Tsy adala amin’ny teny anglisy ny mpianatra omaly?’. Video Mampiaraka daty-afangaro online-dating-toro-hevitra an-tserasera-dating-voalohany ny hafatra an-tserasera-dating-voalohany-hafatra-tips-hafatra-mpitari-dalana